सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष कार्कीको निधन – Enayanepal.com
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष कार्कीको निधन
सुर्खेत, भदौ ५ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष नन्दबहादुर कार्कीको निधन भएको छ । कार्कीको उपचारको क्रममा काठमाडौंमा निधन भएको हो ।
आफ्ना संस्थापक अध्यक्षको निधन भएको शोकमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले ३ दिनसम्म कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने बताएको छ । शनिबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले संस्थापक अध्यक्ष कार्कीको निधनप्रति दुई मिनेट मौन धारणसहित गहिरो दुःख एवम् शोक प्रकट गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । यसैगरी, १३ दिनसम्म कार्यालय परिसरमा शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय भएको संघका महासचिव गोपालकृष्ण गिरीले जानकारी दिए ।
संस्थापक अध्यक्ष कार्कीको निधनले संघलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले उनको कुशल नेतृत्व र असल अभिभावकत्वलाई संघले सधैँ सम्झिरहने उल्लेख गरे ।
२०३८ सालमा तदर्थ समिति गठन गर्ने बेलाका सदस्य हरिशचन्द्र चलाउनेले पञ्चायतकालको प्रतिबन्धित अवस्थामा स्व. कार्कीले निष्पक्षता र निडरतापूर्वक संगठन स्थापना गरेको स्मरण गर्दै संघको यो स्वभाव र प्रकृतिलाई कायम राख्न सुझाव दिए ।
नुनका खाली बोरा ओछ्याएर सुरु गरिएको संघ अहिले साधन, श्रोत सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै संघका आजीवन विशिष्ट सदस्य चलाउनेले संघलाई थप सुदृढ एवम् मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वमा आएको बताए । संघका उद्योग उपाध्यक्ष बासुदेव शर्माले स्व. कार्कीले देखाएको बाटोमा अविचलित भएर दृढताका साथ लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।